Wednesday July 29, 2020 - 07:44:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Baarlamaanka dowladda Turkiga ayaa si aqlabiyad leh umeel mariyay qaanuun cusub oo murun badan dhaliyay kaas oo ku saaban adeegsiga baraha bulsajda ee sanadadii dambe soo caanbaxay.
kulan ay xildhibaannada baarlamaanka dowlada Turkiga ay ku yeesheen magaalada Anqara ayay ku ogolaadeen in dowladdu Faafreeb ay ku samayn doonto waxyaabaha lagu faafinayo baraha bulshadu kuwada xiriirto.
hay'adda amneysty international ayaa durbadiiba ka digtay dhaqan gelinta qaanuunkan waxayna xukuumadda Turkiga ugu baaqday in ay ka laabato oo aysan caburin shacabkeeda.
Wakaaladda wararka Anaadool ayaa sheegtay in xeerkan cusub ee baarlamaanku meel mariyay uu ku qasabayo shirakadaha waaweyn sida Facebook,Twitter iyo Youtube in ay turkiga xafiisyo ka furtaan ayna u hoggaansamaan awaamirta maxkamada wadankaas ay soo saaraan sida in latiro qoraallada lagu faafiyo baraha bulshada ee ay dhibsadaan madaxda dowladda Turkiga.
Xeerkan lameel mariyay ayaa xukuumadda Anqara awood usiinaya in ay faafreebto qoraallada baraha bulshada lagu faafiyo islamarkaana ay baacsato dhammaan mucaaradkeeda gudaha iyo dibadda ee sida aadka ah udhaliila xisbiga talada haya, arrinkan ayaa loo arkaa caburin iyo kaligii talisnimo sida ay ku doodayaan kuwa sheegta in ay udoodaan xuriyadda hadalka.
qaanuunkan cusub ee lasoo saaray ayaa awood usiinaya maamulayaasha Turkida ah in ay ganaax maaliyadeed oo adag duldhigaan shirkadahan sida ay faafisay wakaaladda wararka Turkiga.
Weerar hubaysan oo lagu qaaday saldhig kuyaal degmada Baardheere.